सावधान ! मुला खाएपछि भुलेर पनि नखानुहोस् यी चीज नत्र…. - krishipost.com
सावधान ! मुला खाएपछि भुलेर पनि नखानुहोस् यी चीज नत्र….
यति मात्रै होइन मुला सेवनले पाचन प्रणाली राम्रो बनाउने आम विश्वास पनि छ । तर कतिपय तरकारी र फलफूलसँगै मुला खाएमा स्वास्थ्यमा गम्भीर हा’नी पुग्ने अध्ययनहरुले देखाएका छन् । निम्न उल्लेखित तरकारी, फलफुलसँगै मुला नखान चिकित्सकहरूको सुझाव छ ।
मुलासँग सुन्तलाको सेवन पनि हा’निकार मानिन्छ । अनुशन्धाताहरूले सुन्तला र मुलाको मिश्रणबाट वि’ष उत्पन्न हुने चे’तावनी दिएका छन् । यी दुईबाट निस्कने तत्वले पेटसँग सम्बन्धीत मात्रै होइन शरीरका अन्य भागमा पनि गम्भीर असर पर्ने उनीहरुको चेतावनी छ ।